Spain njem na njem nleta | Otu Di na Nwunye
Spain dị ezigbo mma, nke ahụ dị iche iche dị iche iche, ma na-enye ọtụtụ ndị njem nleta na ọ bụ otu n'ime obodo ndị a kasị eleta site na ndị nleta gburugburu ụwa.
Ọ na-akọwa ọtụtụ obodo ndị na-eme ka ụwa dị elu, ebe dị iche iche na-adọrọ adọrọ, na otu n'ime nchịkọta nke nkà, ihe owuwu, ụlọ nri, na ndị mmadụ n'ụwa.
Madrid - isi obodo Spain na obodo kachasi elu, Madrid bu ndi a ma ama maka nchịkọta ihe ngosi nka nke ndi mmadu na-achikota ihe ndi di ka Pablo Picasso na Salvador Dali, n'etiti ndi ozo. Madrid bụ omenala dị iche iche, gụnyere ọ bụghị nanị akụnụba ya, kama ọ bụkwa akụkọ ihe mere eme nke egwu, ọdịdị, na omenala bohemia nke na-alaghachi ọtụtụ narị afọ.
Barcelona - N'ịbụ onye na-enweta ume na obi ụtọ, Barcelona bụ nrọ ọzọ nke onye hụrụ ya n'anya na Spain nke na-egosi ụfọdụ n'ime katidral ndị mara mma na Europe. A maara obodo ukwu n'akụkụ osimiri n'akụkụ maka ugwu ugwu na ebe obibi, nri ndị mara mma, na ememe agbata obi dị ka ọ bụla n'abalị.
Valencia - N'oge gara aga, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, Valencia enyeghachiwo ya n'ebube mbụ na 20 afọ ikpeazụ, na-eme ka ọ bụrụ ọnọdụ dị mkpa na mpaghara Balearic. Ọfịs ụgbọ mmiri dị oké ọnụ ahịa, Valencia na-ejikwa ọtụtụ ndị Spanish oge ochie eche na ọtụtụ ụlọ n'oge ochie enweghachiri na nso nso a.
Seville - N'ịbụ onye nwere obi ụtọ ma dịiko, Seville bụ isi obodo Andalusia, nke dị n'ebe ndịda Spain, na ebe dị mma maka ndị egwu na ndị hụrụ egwu n'anya. Echiche nke panoramic na Plaza de España na-egbu egbu.
Malaga - Obodo Andalusian nke karịrị 500,000 dị n'ọtụtụ ụzọ ọnụ ụzọ dị n'agbata Spain na Afrịka, ebe mmadụ ga-esi na Strait nke Gibraltar banye Morocco. Na Malaga, a na-ahụ mbibi ndị Rom site na oge gara aga, n'agbata ụfọdụ n'ime ebe ndị mara mma nke dị na Spain.
The Alhambra - Na Granada, Andalusia, The Alhambra gbanwere ghọọ eze eze na 1333 site na Joseph I, Sultan nke Granada. Ebe e wusiri ike bụ ntọala omenala nke Spanish, ma gosipụta mmetụta maka ndị edemede, ndị na-ese ntụrụndụ, ndị na-ese ihe, ndị na-egwu egwu, na ndị na-akọ akụkọ ihe nkiri maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 700 afọ.
Sagrada Familia - "Basilika nke Barcelona nke Ezinụlọ Dị Nsọ" na - ezughị ezu mgbe ya na Antoni Gaudi dị na 1882, ma dị ka otu n'ime katidral ndị kachasị mma, basilicas, ụka, na ụlọ nsọ dị na Europe. Otu saịtị UNESCO Heritage Heritage saịtị, ọrụ na-aga n'ihu na njirimara mara mma ka ọ na-eru nso.
Alakụba Ukwu-Katidral nke Cordoba - E nyere m n'iwu nke Abd al-Rahman I, nnukwu ụlọ alakụba dị na Cordoba mesịrị laghachi n'aka ndị Kraịst tupu a ghọọ onye katidral na 13th century. Taa, ọ na-adị ka ihe osise dị mma, na-ejide ikike nke ndị Arabia na nke Ndị Kraịst n'ọtụtụ dị elu, ikuku elu.
Plaza Mayor - E wuru isi ihe dị na Madrid na ọchịchị Philip III, na mmalite nke 17th century, ma na-eje ozi dịka ebe nnọkọ ntụrụndụ na isi obodo Spanish. Ọ bụ ihe ngosi nke ọmarịcha ọhịa na nke mara mma nke a maara nke ọma na Spain.
Ụlọ Nzukọ Salvador Dali na Ụlọ Portlligat - Naanị awa abụọ n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Barcelona bụ ebe abụọ dị mkpa maka ndị na-ahụ maka nkà na ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme - na Salvador Dali Museum dị na Figueres, na Portlligat Ụlọ (wuru maka nwunye ya, Gala). Hụ ọrụ ndị a dị ebube nke nna ukwu a, ma nwee mmasị na ụlọ ọrụ Portlligat ya, bụ nke fọdụrụ na otu ọnọdụ dị ka ụbọchị ọ gafere.
Costa del Sol osimiri - Ụfọdụ n'ime ihe ndị na-egbukepụ egbukepụ nke Hollywood na ntụrụndụ na-azụ atụrụ ndị dị na Costa del Sol, nke na-agbada n'ebe ndịda site na Malaga ruo n'ọdụ ụgbọ mmiri Gibraltar. Isi obodo ndi isi nri, ihe ndi omenala Spanish, nke ndi Ju, na nke Arabic mere ka ha meghee obosara.
Ahịa nke ihe ịhụ ma mee na Spain chọrọ oge iji nweta. N'ezie, ị ga-achọ ịhụ obodo ukwu dịka ihe kachasị mkpa, ma ụfọdụ n'ime akụ ndị kasị baa ọgaranya Spen na-ada n'ala ndị dịpụrụ adịpụ nke mba ahụ. Enwere ezigbo ihe na Spain maka onye ọ bụla, nke ọ bụla mmasị.
3 - ụbọchị 4: Madrid (gbakwunye Toledo dịka njem nlekọta ụbọchị maọbụ site na ụgbọ ala)
Ụbọchị 6, tinye: Barcelona
Ụbọchị 8, tinye: Sevilla
Ụbọchị 10, tinye: Grenada
Ụbọchị 13, tinye: Nerja na / ma ọ bụ Ronda
Ụbọchị 15, tinye: Salamanca na / ma ọ bụ Segovia
Ụbọchị 18, tinye: Santiago de Compostela
Ụbọchị 21, tinye: Basque Region (San Sebastián na Bilbao bu isi obodo)
Ọzọ: Ibiza na Mallorca bụ ebe ndị njem nleta na-ewu ewu, ma, dịka àgwàetiti ndị dịpụrụ n'ụsọ oké osimiri site na oke dị anya, chọrọ ụlọ ọrụ ihe nkiri ha niile. Ọ na-adịrị ha mfe inweta na Barcelona, ​​Murcia, na Valencia.
Ego: Euro (EUR). EUR ugbu a bụ 1 ka 1.2 USD.
Ike Ike: Na Spain, ike ntọala dị n'ụdị F. Ụdị voltage ọkọlọtọ bụ 230 V na ụdị ọkọlọtọ bụ 50 Hz.
Gụkwuo banyere Spain!
Barcelona, ​​bụ otu n'ime obodo ndị kasị ewu ewu ma dị ndụ na Europe. Ya mere, ihe a ga-eme ebe a? Ezigbo okwu, ... GỤKWUO
Arroz con Pollo bụ ihe nlekọta na mpaghara ọ bụla nke asụsụ Hispanic, ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ mmadụ aghụghọ na ụfọdụ flair ... GỤKWUO
O nwere ike ịbụ na ị nụla banyere Malaga dị ka obodo Costa Del Sol nke nwere ọganihu, omenala gastronomy na akụkọ ihe mere eme ... GỤKWUO
Ebee Ka I Nọrọ na Madrid
Madrid bụ otu n'ime ebe dị egwu na nke ọdịbendị mmadụ nwere ike ịga leta; obodo gbawara mara mma ... GỤKWUO
Ịtụpụta ebe ị ga-anọ na Barcelona siri ike, ịsị nke kachasị. Ọ bụ obodo nwere ọtụtụ ọsọ ọsọ, ọdịda obodo, ... GỤKWUO
Europe bụ otu kọntinent nwere ihe niile. Site na anyanwụ nke osimiri nke Gris na snow-capped ebube nke Switzerland ... GỤKWUO
A maara Barcelona maka nkà ya na ịrụ ụlọ ya, ma eleghị anya ọ bụghị n'ihi ihe dị ala ọ ga-eme. Ọrụ a ma ama nke ... GỤKWUO
Maka ndị enyi anyị niile ndị hụrụ n'anya n'ebe ahụ na-agagharị ụwa, ebe a bụ ntụziaka ole na ole dị mfe, ... GỤKWUO
Ọhụụ nke onye na-ahụ n'anya na ihe oriri, Barcelona nwere àgwà pụrụ iche nke pụtara ìhè n'okporo ámá ọ bụla ... GỤKWUO
Njem Barcelona - Art All Night
Mma nke Barcelona bụ bejeweled na multi-faceted. N'etiti ọtụtụ ihe ngosi nka nke ihe nka na Gaudi architecture, na ... GỤKWUO